Embusweni, akuphumi kuphela amazwi emlonyeni Wami, kodwa izinyawo Zami zinyathela ngeqholo yonke indawo emhlabeni. Ngale ndlela, nginyathela phezu kwazo zonke izindawo ezingcolile nezingahlanzekile, ukuze kungaguquki izulu kuphela, kodwa nomhlaba usendleleni yokuguquka, maduze uzokwenziwa ube musha. Emkhathini, yonke into iba yintsha ekukhanyeni kwenkazimulo Yami, iveza ingxenye ethokomalisa inhliziyo ejabulisa kakhulu imizwa ivuselele nomoya, kube sengathi manje umuntu usehlala ezulwini ngaphezulu kwamazulu, njengoba kucatshangwa umcabango wabantu, kungahlushwa uSathane, kukhululekile ekuhlaselweni izitha ezingaphandle. Phezu komkhathi, inqwaba yezinkanyezi zithatha indawo eziqokelwe yona ngokusho Kwami, zikhanyisa ukukhanya kwazo ezifundeni zezinkanyezi ngamahora obumnyama. Akekho noyedwa umuntu ofuna ukugcina imicabango yokungalaleli, ngakho-ke, ngokuhambisana nobuqu bomyalelo Wami wokuphatha, umhlaba wonke ulawulwa kahle futhi usahamba ngohlelo olufanele: Akukho ukuphazamiseka okube khona, futhi ubunye bomkhathi abukaze bunqamuke. Ngikhipha amagxathu andizayo ngaphezu kwezinkanyezi, futhi uma ilanga likhipha imisebe yalo, ngivimba ukufudumala kwayo esibhakabhakeni, ngikhiphe iziwombe ezinkulu zokukhithika kweqhwa okukhulu njengezimpaphe zehansi eziphuma ezandleni Zami. Kodwa uma ngiguqula umqondo Wami, lonke iqhwa lincibilikela emfuleni. Ngokuphazima kweso intwasahlobo ibe isifikile kuyo yonke indawo ngaphansi kwesibhakabhaka, bese uhlaza olucwebile luguqula konke emhlabeni. Ngiyazulazula esibhakabhakeni, ngokushesha, umhlaba wembozwe ubumnyama ngenxa yomumo Wami: ngaphandle kwesexwayiso, “ubusuku” bufikile, emhlabeni wonke kumnyama ngangokuthi akekho obona isandla esiphambi kobuso bakhe. Ngokufiphala kokukhanya, abantu bathatha ithuba benze izinto ezizobabhubhisa, bentshontshelana bodwa. Izizwe zomhlaba zibe nokwahlukana obuxakalala, zangena esiyaluyalwini sodaka, kuze kube ukuthi azisahlengeki. Abantu bayazabalaza ekuhluphekeni, bakhale ekuhluphekeni, balile ngenxa yenhlupheko, befisa ukuthi kufike ukukhanya futhi phakathi kwabo kuphele izinsuku zobumnyama kubuyiswe impilo ebike yaba khona. Kodwa kade ngibashiyile abantu ngokuphebeza ingalo Yami, angeke ngiphinde ngimzwele ngenxa yobubi bomhlaba: Kade futhi ngabanyanya futhi ngabadikila abantu emhlabeni wonke, ngavala amehlo Ami ezimweni zomhlaba, ngafulathelisa ubuso Bami kukho konke ukuhamba komuntu, konke ukunyakaza kwakhe, ngayeka ukuthokoziswa ubungane bakhe nobumsulwa bakhe. Sengiqale olunye uhlelo lokwenza umhlaba ube musha, ukuze lo mhlaba omusha uthole ukuzalwa kabusha ngesikhathi esingalindelekile ungabe usacwila emanzini. Kubantu, zingaki izimo ezingajwayelekile ebezilinde ukuthi ngizilungise, mangaki amaphutha okumele ngize Mina uqobo ngizowavimba ukuthi angenzeki, zingakanani izintuli okumele ngizisuse, zingaki izimfihlakalo okumele ngizembule: Bonke abantu balinde Mina, bafisa ukufika Kwami.
Uma abantu Bami, ngomsebenzi Wami, bekhazimuliswa kanye Nami, ngaleso sikhathi isigodlo sikadrago omkhulu obomvu sizombululwa, lonke udaka nokungcola kuzoguguleka, namanzi angcolile, avele eminyakeni eminingi edlule, azokonyiswa umlilo Wami ovuthayo, angabe esaba khona. Ngemva kwalokho, udrago omkhulu obomvu uzobhujiswa esithandweni somlilo nesibabule. Ngabe uzimisele ngeqiniso ukuhlala ngaphansi kweso Lami elibukhali ukuze ungahlwithwa ngudrago? Ngabe uwazonda ngempela amaqhinga akhe enkohliso? Ubani ozoma aqine angifakazele? Ngenxa yegama Lami, ngenxa yoMoya Wami, ngenxa yalo lonke uhlelo Lwami lokuphatha – ubani ozokwazi ukunikela amandla akhe onke asemzimbeni wakhe?” Waphinde futhi wathi: “Namuhla, lapho umbuso usemhlabeni wabantu, yisikhathi engize ngaso mathupha emhlabeni wabantu. Ngabe ukhona ongaba nesibindi angene empini egameni Lami? Ukuze umbuso uzothola umumo wawo, ukuze inhliziyo Yami izoneliseka, futhi, ukuze usuku Lwami luzofika, ukuze isikhathi sizofika lapho izinto eziningi ezidaliwe zizozalwa kabusha zikhule zande, ukuze umuntu akhululwe olwandle lwenhlupheko, ukuze ikusasa lifike, kube mnandi, lichume, futhi ukuze injabulo yesikhathi esizayo izofezeka, bonke abantu bazama ngamandla abo wonke, bengashiyi lutho ekuzikhandleni kwabo bezikhandlela Mina. Lokhu akulona uphawu lokuthi ukunqoba sekungokwami, nophawu lokupheleliswa kohlelo Lwami?
Uma abantu behlala kakhulu ezinsukwini zokugcina, kulapho bezozwa khona ukungabi nalutho komhlaba futhi bazophelelwa isibindi sokuphila impilo. Ngalesi sizathu, abantu abaningi babulawe ukuphoxeka, abaningi babo baphoxekile endleleni yabo, abaningi bazihlukumeze ngokuthi bakhohliseke esandleni sikaSathane. Ngikhulule abantu abaningi, ngeseka abaningi, kanti kaningi, uma abantu sebelahlekelwe ukukhanya, ngibabuyisele endaweni yokukhanya, ukuze bazongazi ekukhanyeni, bangithokozele enjabulweni. Ngenxa yokufika kokukhanya Kwami, kuba nokungithanda ezinhliziyweni zabantu abahlala embusweni Wami, ngoba nginguNkulunkulu wokuthi abantu bamthande, uNkulunkulu abantu ababambelela Kuye, bese beba nesithombe somumo Wami. Kodwa uma sekwenzekile konke, akekho oqondayo ukuthi ngabe lokhu kungumsebenzi kaMoya, noma ngumsebenzi wenyama. Lokhu kukodwa kwanele ukuthi umuntu abone imininingwane yomzuzu ekuhambeni kwempilo. Umuntu akakaze angenyanye ekujuleni kwenhliziyo yakhe; kodwa ubambelela Kimi ekujuleni komoya wakhe. Ubuhlakani Bami bukhulisa uthando, izimangaliso engiyenzayo yidili emehlweni akhe, amazwi Ami ayawuhlupha umqondo wakhe, yize kunjalo uyawanakekela. Uqobo Lwami lwenza umuntu aphelele amandla, ashaqeke futhi adideke, kodwa yize kunjalo uzimisele ukukwamukela konke. Ngabe lokhu akusona isilinganiso esinembile somuntu njengoba enjalo?
Ingqikithi KaKristu Ukuthobela Intando KaBaba Osezulwini UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I Mayelana Nenqubo Yokuthandaza Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu